ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလ၏… – PVTV Myanmar
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလ၏ COVID 19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး ပြောကြားချက်ကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 33K Share – 5742
ပြည်သူ့ အစိုးရအား လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ ပြည်သူတစ်ယောက် အနေနှင့် တတ်နိုင်သည့် ဘက်မှလည်း တာဝန်ကျေစွာ ပါဝင်ကူညီနေပါတယ်ရှင့်။
Tin Mon Soe Myint says:
ယာယီသမ္မတကြီးကျန်းမာပါစေ သမ္မတကြီး ဦးဝင်းမြင့် မန္တလေးဝန်ကြီးချုပ် ရန်ကုန်ဝန်ကြီးချုပ် အမေနဲ့ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူများအားလုံး ကျန်းမာကြပါစေ
Kay Tun says:
2021-07-09 at 7:23 PM
ဟုတ်ကဲ့ သမ္မတကြီး လိုက်နာပါမယ်
Thein Thein Lay says:
2021-07-09 at 7:33 PM
2021-07-09 at 7:35 PM
သမ္မတကြီးနဲ့ UNG ဝန်ကြီးများစိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းပြည့်စုံပါစေ
ကူညီပေးပါအုံး ဗျာ အမေ့ကိုလွမ်းလှပါပြီ အခု မန်းလေးမှာ အောက်စီဂျင် ပျက်နေပါပြီ ပိုက်ဆံရှိရင်တောင်၀ယ်လို့မရပါဘူးဗျာ အမေ ရှိရင် ခဏလေးနဲ့ အဖြေ ရမှာပါ အခုတော့ အရမ်းအခက်တွေ့နေပါပြီ မအလ ကပြည်သူတွေကို ရက်စက် ဖို့ပဲသိတာပါဗျာ
Mu Myint says:
2021-07-09 at 8:13 PM
ပေးတဲ့ဆု နဲ့ ပြည့် ရပါလို၏။
သမ္မတကြီး ပြည်သူတွေအတွက် စိုးရိမ်ပီးဂရုစိုက်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ၊ပြည်သူတွေကတော့ မင်းအောင်လှိုင်ကို အတူတကွချေမှုန်းကြမှာပါ
Ommar Sint says:
2021-07-09 at 8:31 PM
Thanks MrActing President. We appreciate you, NUG and CRPH.
Yaung Ne Oo says:
2021-07-09 at 8:46 PM
ဒုတိယလိႈင္းတုန္းက အစိုးရကေရာျပည္သူပါ တက္ညီလက္ညီနဲ႔ ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီးကို ပူးေပါင္းတိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္…..အခုတေခါက္လဲ ျပည္သူေတြနဲ႔ ျပည္သူအစိုးရ တက္ညီလက္ညီနဲ႔ပူးေပါင္းပီး ကပ္ဆိုးကိုေရာ မေကာင္းဆိုးဝါးေတြကိုေရာ အပီးတိုင္ တိုက္ထုတ္ရမယ္
Pausa Kaw Ja says:
2021-07-09 at 8:57 PM
Jaw dik ai Ah Gu
သမ္မတကြီးနှင့် NUG ပြည်သူ့အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ
အမေစုနဲ့ ခေါင်းဆောင်များ အားလုံးလည်း ဘေးကင်း ကျန်းမာကြပါစေ
Virginia Virginia Paola says:
2021-07-09 at 10:04 PM
Aye Nu Nu Aung says:
Hla Hla Khaine Hlhlkhaing says:
2021-07-10 at 8:35 AM
Paung Mote Lay says:
2021-07-10 at 8:38 AM
ပေါတောတောတွေ သိပြီးသား ဟာတွေလာပြောသွားတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ ဝယ်ဖို့ အစီအစဉ်ကြမပြောသွားဘူး။ မြန်မာစာတောင်ကောင်းကောင်းဖတ်တ်ပုံမရဘူး 🙂
Daw Daw Thone says:
တိုင်းရင်းသားညီအကို​မောင်နှများ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံး (မအလ နှင့် ​သူ၏နောက်လိုက်များမပါ) ကပ်ဆိုး၊ ​ရောဂါဆိုး၊ ​ဘေးဆိုး၊ မင်းဆိုး ဘေးမှ အမြန်ဆုံး လွတ်​မြောက်ကြပါ​စေရှင် 🙏🙏🙏
Khin Thein Win says:
ကျေးဇူးပါ သမ္မတ ကြီးရှင့်
စကားသံမှာကို မေတ္တာသံ ပါနေတာ ၊ ဟို ခွေးမသား မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တော့ နံသာဆီနဲ့ အီးလို ကွာတယ်
Khine Khin Soe says:
NUG ကနေ stay at home or lock down နေရမည့်နေရာများ မြို့များကိုကြေညာစေလိုပါတယ်
June Bothein says:
အမေစု ကိုဗစ်ကာကွယ်ဖို့ ပြည်သူတွေကိုပြောကြားထားတဲ့ vidoe ကိုအမြဲ့းတမ်းထုပ်လွှင့်ပြသပေးပါလား
ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ရင် ဘာဆေးတွေသောက်ရမလဲ အလွယ်တကူပေါ့ အခုဟာက တော်တော်များက နှာခေါင်းပိတ်တာ ကိုပူတာ လောက်တော့တွေ့ရတယ်။
ကိုဗစ် တော်လှန်ရေး မှာ mask တပ် ဖို့က အဓိက ကျပါတယ်
▪️ mask ဘယ်လို တပ်ရမလဲ ဆိုရင်
နှာခေါင်း နဲ့ ပါးစပ် လုံအောင် တပ်ပါ
▪️ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာ တပ်ရမလဲ ဆိုရင်
၂၄ နာရီ တပ်ရပါမယ် ၊ အိမ်မှာ နေရင်လဲ တပ်ပါ၊ အိပ်နေလည်း တပ်ပါ။
▪️ ဘယ်လို mask အမျိုးအစား တပ်ရမလဲ
#အသက်ရှူကောင်းဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ အမြဲတပ်ရမှာ မို့ပါ။ အိမ်မှာ နေရင် အဝတ် mask တပ်ပါ
▪️ အိမ်သာ တက်ချိန်လည်း တပ်ပါ၊ ထမင်းစားရင် တယောက်စီ စားပါ ။
ကိုဗစ်ဟာ ကိုယ့်ဘေးမှာ အမြဲရှိတယ်လို့ မှတ်ယူပြီး အမြဲ သတိထားပါ
2021-07-11 at 7:32 AM
2021-07-12 at 12:32 AM
ဒီကောင် မျက်လုံးတော့ မြင်ရလား?